Shirkadda Super Group of Companies oo Abaal-marinno kala Duwan Ku Maamuustay Shaqaale Hufnaantooda iyo Kartidooda laga markhaati kacay | Salaan Media
Shirkadda Super Group of Companies oo Abaal-marinno kala Duwan Ku Maamuustay Shaqaale Hufnaantooda iyo Kartidooda laga markhaati kacay
Hargeysa (SalaanMedia)- Shirkadda Super Group of Companies, ayaa munaasibad ay abaal-marinno ku guddoonsiisay u qabatay Shaqaale-weynaha kala duwan ee ka hawl-gala, iyadoo kuwoodii ugu dedaalka badnaa lagu maamuusay shaqo-wanaag iyo hufnaan ay Muujiyeen sannadkii tagay ee 2019-kii.
Munaasibadda abaalmarinta ah oo lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxa ka qayb-galay Maamul Guud ee Super Group, Shaqaalaha ka hawl-gala Qaybaha shirkaddu ka kooban tahay, marti-sharaf kale iyo Ganacsato qaarkood ka-qayb-galka munaasibadda uga yimi Deegaanka Soomaalida ee Ethiopia.
Guddoomiyaha Shirkadda Super Group, Cali-Keyse Cumar Axmed oo ugu horeyn munaasibadda ka hadlay, ayaa sheegay in ujeeddada ugu muhiimsan ee ay maamul ahaan ka leeyihiin munaasibadda ay tahay Dhiirri-gelinta shaqaalaha shirkadda.
“Waxa iigu farxad badan doorkan qaabkii wanaagsanaa ee loo soo xushay Shaqsiyaadka Sannadka oo shaqaale-weynuhu u soo xusheen si caddaalad ah oo daah-furan, taasina waxay ka tarjumaysaa sidaynu isugu kalsoonnahay, waxay muujinaysaa sida niyadda-san ee shaqaale iyo maamulba aynu isugu duubannahay,” Sidaas waxa yidhi Guddoomiyaha Super Group of Companies Cali Keyse Cumar oo ujeeddada loo qabtay munaasibadda Kulmisay shaqaale-weynaha shirkadda.
Guddoomiyaha oo hadal dhiirri-gelin ah u jeedinayey shaqaalaha, waxa uu yidhi, “Sannadka 2020 waxa loo baahan yahay in dedaalka la kordhiyo maadaama sannadkii hore dhismeyaal iyo hawlo badan soo galnay, waxaanan dhiirri-gelinayaa in sannadkan 2020 guntida dhiisha layskaga dhigo”.
Madaxa Maaliyadda iyo Xiisaabaadka ee Shirkadda Super Group Maxamed Sheekh Yuusuf Sugulle oo Munaasibada ka hadlay, ayaa iftiimiyey muhiimadda shaqaaluhu kaga jiraan horumarka shirkadda, waxaanu yidhi, “Shirkad waliba waxay ku xisaabtantaa waa shaqaalaheeda, iyaga ayaana ka dhigi kara mid horumartay ama mid aan horumarin. Horumarka aynu samaynay guud ahaan iyo gaar ahaanba waa mid shaqaaluhu iska leeyahay. Annagu maamul ahaan waxaanu ognahay oo ka war haynaa kaalinta aad shirkadda ugu jirtaan. Waxaana wax lagu faano ah kartida iyo hufnaanta ay shaqaalaheennu leeyihiin. Waxa kale oo wax lagu faano ah inaynu ku suntannahay oo tusaale fiican inoo tahay daacadnimo iyo xalaal-miirasho laynagu xanto”.
Maamulaha Super Data Technology, Mustafe Xaaji Yuusuf oo isaguna munaasibadda ka hadlay, ayaa faahfaahiyey adeegyo muhiim u ah bulshada oo shirkaddu soo kordhisay kuwaas oo ka mid yihiin inay muddo kooban ku keenayaan qalabka macaamiishu u baahdaan ee noociisa aan laga heli karin gudaha dalka.
“Qorshayaasha aanu hirgelinnay ee sannadkan inoo qabsoomay waxa ka mid ah inaanu samaynay Special Orders ama Dalabaad gaar ah oo aanu u samaynayno dadka la caddiban dalabaadka gaar ah tusaale ahaan haddii baytariga kamaradda ama Jaarjarka Laptopka loo waayo, qofku isagoo taagan ayaa isla markiiba intaanu qiimeynayo muddo yar oo kooban oo laba ama saddex cisho ah ugu keenaa.”
Eng Caydaruus Xuseen Yaasiin oo isagu ku hadlayey magaca Shaqaale-weynaha shirkadda, ayaa maamulka shirkadda ku ammaanay sida ay ugu heellan yihiin dhiirri-gelinta shaqaalaha oo uu sheegay inay udub-dhexaad u tahay halbeegyada hoggaamiya u haya horumarka shirkadda, isagoo uga mahad-celiyey tallaabadaas.
Guddoomiyaha Shirkadda HASI Consulting Cabdiraxmaan Xirsi oo ka mid ahaa marti-sharaftii munaasibadda lagu soo marti-qaaday, ayaa ammaanay siyaasadda maamul ee shikadda oo uu ku sifeeyey mid qaab-dhismeedkeedu ka tilmaaman yahay shirkadaha la mid ah.
“Runtii, wax badan oo aanay shirkaduhu ka fekerin ayay ka fekereen, dhinac kasta oo shirkad laga dhiso hadday tahay maaliyadda, hadday tahay shaqaalaha, hadday tahay isu-socodka alaabta, soo-iibinta iyo sii-iibinta; iyo hadday tahay dhaq-dhaqaaqa iyo macaamilka dadka, runtii dhinac kasta way wanaajiyeen,” Sidaas ayuu yidhi Cabdiraxmaan Xirsi.
Gebo-gabadii munaasibadda, waxa halkaas abaal-marinno kala duwan oo lagu maamuusay lagu guddoonsiiyey shaqaalaha shirkadda ee kartida iyo hufnaanta muujiyey Sannadkii hore ee 2019-kii, kuwaas oo sida maamulku sheegay ay shaqaalaha laftoodu qayb ka ahaayeen xulashadii lagu aqoonsaday hormooodka shaqaale-weynaha Super Group ee sannadkii 2019-kii.
Shirkadda Super Group, ayaa sannad kasta bilowgiisa sidan oo kale u qabta munaasibad kulmisa shaqaale-weynaha shirkadda, iyadoo abaal-marinno dhiirrigelin ah la guddoonsiiyo hawl-wadeennada kartidooda iyo wax-qabadkooda looga markhaati kaco muddadaas sannadka ah.
Sheekh Aadan-Siira oo Garnaqsi Adag kaga jawaabay eedaymihii Xildhibaan Xasan Shahar
Somaliland Iyo Taiwan Oo Heshiis Iskaashi Kala Saxeexday
Xildhibaano Ka Tirsan Golaha Wakiilada JSL Oo Wecyigellin Iyo Kormeer Ku Maray Gobolka Awdal
Berbera:Gudoomiye Axmed Cabdi Dheere Oo Xilkii U Kala Kala Wareejiyay Gudoomiyihii Hore Xisbiga Kulmiye Ee Gobolka Saaxil Iyo Gudoomiyaha Cusub
Muruqmaalka Wajaale Iyo Gaadiidleyda Ayaa Cabasho Ka Muujiyay Gaadiid Khudaar Itoobiya Ka Keenay
Wasiirka Gaadiidka Somaliland Oo Kormeeray Xafiiska Gadiidleyda Tawfiiq Ee Magaalada Berbera
Burco:Wasaarada Caafimaadka JSL Ayaa Daawooyin Ku Wareejisay Cisbitaalka Dhimirka Ee Maandhaye
Muqdisho:Ra’iisal Wasaare Rooble Oo Ka Hadlay Shirwaynaha 3aad Ee Xeer Ilaaliyayaasha
Muqdisho:Jawdwalkii Doorashada Aqalka Sare Ee DFS Oo Fashil Ku Yimid Iyada Oo Ku Beegnayd In Maanta La Qabto
Madaxwaynaha JSL Oo Qaabilay Safiirka Dalka Czech Republic Ee Fadhigiisu Yahay Adisababa